Uyenza njani Ubuntu ngokuzenzekelayo ifake ii-patches zokhuseleko | Ubunlog
Kwiinyanga nje ezidlulileyo iinkqubo ezininzi kunye neeprojekthi ezininzi zangaphakathi ezinxulumene noBuntu zizama ukusombulula ingxaki yohlaziyo lokhuseleko.
Ngokuqhelekileyo, Ubuntu rhoqo kwiintsuku ezimbalwa okanye zonke iiveki ezimbalwa zikhupha uhlaziyo lokhuseleko kunye nokuphucula inkqubo yokusebenza. Oku kuluncedo, kodwa kubasebenzisi basekhaya kuyacaphukisa. Kuyacaphukisa kuba akukho nto iphikisana nokufaka ezi zikhuselo.
Ku-Ubuntu okwangoku kukho isicelo esiza kufaka lonke uhlaziyo olufunyanwa ngu-Ubuntu, ngaphandle kokwenza nantoni na malunga naloo nto. Le phakheji kubizwa ngokuba kukuphuculwa okungagcinwanga, iphakheji ehlaziya inkqubo yethu kodwa ikwasivumela ukuba sibonise ukuba loluphi uhlobo lweephakeji esingafuni ukuzihlaziya.
Ukufakwa kwePatch yoKhuseleko oluzenzekelayo kubalulekile kuBasebenzisi basekhaya
Oku kunomdla kuba Abaphathi benkqubo banokusebenzisa le phakheji ngaphandle kweengxakiKuba iipakeji ezibalulekileyo aziyi kuhlaziywa ngokuzenzekelayo ukuba siyayifuna.
Ukufakela oku, kufuneka kuqala sivule i-terminal kwaye sichwetheze:
Emva koko kuya kufuneka sivule ifayile ukuyilungiselela. Ngenxa yoko, kufuneka sibhale oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
Kwaye sizama ukuba nale migca kuxwebhu njengoko injalo:
Zikhona uluhlu lwamathala eencwadi kunye neefayile ezingayi kuhlaziywa. Olu luhlu lunokwandiswa kodwa ukuba sifuna ukuba iiphakheji ezikolu luhlu zihlaziywe, kufuneka sivule le fayile ilandelayo:
Kwaye wenze olu tshintsho lulandelayo:
Ngale nto amathala eencwadi akolu luhlu aya kuhlaziywa ngenkqubo yonke. Ewe kunjalo, ukuba singabalawuli benkqubo, le phakheji iyingozi kuba uhlaziyo lunokukroba lonke uqwalaselo lweseva. Gcina engqondweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Uyenza njani Ubuntu ngokuzenzekelayo ifake ii-patches zokhuseleko
Uyilungiselela njani indlela yokuziphatha yelaptop xa usithoba isiciko